एक युवकका ८ पत्नी, यसरी मिलेर बसेका छन् एउटै घरमा! | NepalManch
एक युवकका ८ पत्नी, यसरी मिलेर बसेका छन् एउटै घरमा!
माघ १९ २०७८, बुधबार
आफ्नाबारे मानिसहरूले अनेक अनुमान गरेको उनी बताउँछन्। जस्तो : आफू धेरै धनी भएकाले ८/८ जना पत्नी राखेको होला भन्ने। तर उनी भन्छन्, ‘विश्वास गर्नुस्, म धनी छैन। हामी सबै काम गर्छौं र आफ्नो आवश्यकताअनुसार पैसा कमाउँछौं।